Uhlelo luka2012 lwathulwa ngokusemthethweni eMgungundlovu ngoMgqibelo mhlaka 9 kuNhlangulana lapho othisha abangu-250, bamazinga nasezindaweni ezahlukene esifundazweni, bafika bazobhalisela loluhlelo lokuthuthukisa amakhono. Abangaphezu kuka-200 babhalisa eThekwini.
‘Ngikulangazelele ukufunda izindlela ezintsha zokufundisa isifundo,’ kusho uNksz Thandiwe Xulu, ofundisa izibalo nesiNgisi ebangeni likaGrade 9 eSmero High School e-Edendale. UXulu unethemba ukuthi uzothola amacebo azothandwa izingane azowasebenzisa ekilasini. ‘Ngiyazi ukuthi loluhlelo luzonginikeza ukuzethemba njengothisha wezibalo,’ kusho uXulu.
Manje unyaka wesithathu kodwa loluhlelo luyaqhubeka ukuphumelela kakhulu. Lufundisa othisha ngohlelo lweGeneral Education and Training (iGET) neFurther Education and Training (iFET) nangezifundo zeData Handling (Descriptive Statistics neProbability) kanye neFinancial Mathematics.
NgeMgqibelo eyishumi ekuseni, ithimba elizimisele lothisha abafundisa iStatistics e-UKZN beholwa owaluqala loluhlelo uSolwazi Delia North, banikela ngesikhathi sabo mahhala ukuze baqeqeshe labothisha ngaphansi kwesisho esithi “train-the-trainer” ezikhungweni zaseMgungundlovu naseHoward College emikhakheni yeGET, FET (Data) neFET (Probability neFinancial Mathematics).
UNorth ulujabulele loluhlelo. ‘Ngokunikeza othisha amakhono angcono okufundisa ngaleyondlela kuzothuthukisa izingane zesikole nokuzinikeza ukuzethemba ukuthi bazophasa izifundo zabo zezibalo. Siyaphambili naloluhlelo!”